देशकै सबैभन्दा ब्यस्त सडक नारायणगढ मुग्लिन सडक बनेको १ वर्ष नपुग्दै भासियो, अब के गर्ने ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/देशकै सबैभन्दा ब्यस्त सडक नारायणगढ मुग्लिन सडक बनेको १ वर्ष नपुग्दै भासियो, अब के गर्ने ?
देशकै सबैभन्दा ब्यस्त सडक नारायणगढ मुग्लिन सडक बनेको १ वर्ष नपुग्दै भासियो, अब के गर्ने ?
काठमाडौ, असार ३० । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको १७ किलोमा सडक थप भासिएपछि सवारी साधन एकतर्फि सञ्चालन गरिएको छ । आज बिहान भासिएको सो ठाउँमा ग्राबेल हालेर दुईतर्फी यातयात सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीका अनुसार यसअघि भासिएको ठाउँमा थप भासिएपछि समस्या भएको हो । सो सकडखण्डको १७ र २६ किलो भन्ने स्थानमा सडक बिस्तार गरेको एक वर्ष नपुग्दै भासिएका थियो ।
उहाँले १७ किलोमा तीनदेखि ३ दशमलब ५ मिटर फराकिलो ३५ मिटर लामो क्षेत्रमा एक फिटजति सडक भासिएको बताउनुभयो । सो ठाउँमा सडक नौ मिटर फराकिलो छ । सडक ग्राबेलिङ गरेपछि दुईतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिए ।
सो ठाउँमा विसं २०६० मा सडकमुनिबाट एङ्कर वाल दिएर निर्माण गरिएको थियो । यसैमा समस्या आएको जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा तलबाट त्रिशूली नदीले काटेका कारण एङ्कर वालले काम गर्न छाडेको हो । दुई वर्षअघि सो सडक विस्तारको काम गरिएको हो । सडक निर्माण गरिएको एक वर्ष नपुग्दै सो ठाउँ र २६ किलोमा ६ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडक ७० मिटर लामो भाग भासिएको छ । ती दुवै ठाउँमा मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि बोलपत्र नपरेको सडक विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले मर्मतका लागि दुईपटक बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत कोही पनि नआएको बताउनुभयो । प्राविधिकरुपमा दक्ष भएको ठेकेदार कम्पनीले मात्र काम गर्नसक्ने भएकाले जो कोहीले आँट नगरेको बुझिएको छ । ठेक्का नपरेपछि यस वर्षको वर्षात्मा पनि यत्तिकै सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो । भासिएको क्षेत्र बढेमा वर्षात्को समयमा समस्या आउनसक्ने अनुमान गरिरहेका बेला सो ठाउँमा सडक थप भासिएको हो । यस सडक राजधानी भित्रने र बाहिरिने प्रमुख मार्ग हो । सडकमा दैनिक १० हजार सवारीसाधन आवागमन गर्ने गर्दछन् ।
चीनले रोज्यो नेपाललाई, भारतलाई झट्का, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस्तो भन्यो (हेर्नुहोस भिडियो)
#BREAKINGNEWS भावपूर्ण हार्दिक (श्रद्धान्जली) शिवरात्रीको दिन यस्तो भयो हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु ।?
यसरी प्रहरीले ढा’ले भारतीयलाई, सीमा क्षेत्रमा ड’रलाग्दो भि’डन्त(भिडियो)
सुनको मूल्य आजपनि पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो, हेर्नुहोस् तोलाको कति पर्छ..